पथरीमा फेरी अर्को डरलाग्दो हत्या ! बजारमा फैलियो त्रास::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
पथरीमा फेरी अर्को डरलाग्दो हत्या ! बजारमा फैलियो त्रास
मिडिया डबली प्रकाशित : आइतवार, बैशाख ८, २०७६
पथरी – मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा फेरी अर्को हत्या भएको आशंका गरिएको छ । पथरीशनिश्चरे १ पथरी बहुमुखी अगाडी रहेको सरकारी जग्गामा ब्लड, कपाल र पेन्ट लगायतका सामग्री फेला परेका छन ।
सिसौघारी रहेको सो जग्गाका २,३ ठाउँका भुइ पूर्णरुपमा माडिएको, सो क्षेत्रको झारमा भर्खर सुक्दै गरेको ब्लड, ब्लड लागेको पेन्ट, लाइटर लगायतका सामान फेला परेको छ । पेन्ट र कपाल इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले अनुसन्धानका लागि लागिसकेको छ । सो क्षेत्रमा अहिलेपनि लाइटर र कपाल त्यासै छोडिएको छ । सो क्षेत्रमा अहिले स्थानीयको बाक्लो उपस्थीति रहेको छ ।
शनिबार मात्र पथरीमा रिना बस्नेतको शव भेटिएको थियो । उनको हत्या वा आत्माहत्या खुलेको छैन । आईतबार भेटिएको सो प्रमाण कस्को हो र शब कहाँ पुर्याइयो भन्ने खुलेको छैन । सो बिषयमा अनुसन्धान भईरहेको ईलाका प्रहरी कार्यलय पथरीका प्रहरी निरिक्षक कमल बजगाँईले बताएका छन ।